Store Supervisor ( Female 1 Posts ) | Job in Myanmar ﻿
7.12.2019, Full time , Technology
- Store ပိုင်းနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး အသေးစိတ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရမည် ။
- အင်္ဂလိပ်စာအသုံးပြုပြီး နိုင်ငံခြားသားနှင့်ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်ရမည် ။
- Store Software အသုံးပြုနိုင်ပြီး Microsoft Application အား ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည် ။
- မိမိဌာနရှိ ၀န်ထမ်းများ အား ကောင်းမွန်စွာထိန်းသိန်းကိုင်တွယ် နိုင်ရမည် ။
- အသက် ၄၀ နှစ် အောက် ဖြစ်ရမည် ။
- တစ်နေ့စာတာဝန်များကို တစ်နေ့အတွင်း ပြီးဆုံးအောင် စီမံ ခန့်ခွဲနိုင်ရမည် ။
- သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ ( ၃) နှစ် အနည်းဆုံး ရှိရမည် ။
- အင်္ဂလိပ်စာ ကောင်းမွန်စွာ ပြောဆိုနိုင်ရမည် ။
- Store Software / Microsoft Office အား ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည် ။
- လှိုင်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်တွင် နေထိုင်သူဖြစ်ပါက ပိုမိုဦးစားပေးမည် ။
Warehouse Store Supervisor Logistics & Supply Chain Jobs Logistics & Supply Chain Jobs Store Supervisor Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Skill in excel ?
Can work immediately ?
Experience in store supervisor field ?